Gịnị Mere O Ji Dị Mma Ka Ị Mụọ Baịbụl? | Ihe Onyeàmà Jehova na Onye Agbata Obi Ya Nwere Ike Ịkparịta
GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bicol Bislama Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Malagasy Mam Maya Mazatec (Huautla) Mixe Mongolian Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Runyankore Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
IHE ONYEÀMÀ JEHOVA NA ONYE AGBATA OBI YA NWERE IKE ỊKPARỊTA
N’ebe a, e dere ihe Onyeàmà Jehova na onye agbata obi ya nwere ike ịkparịta. Ka anyị were ya na Onyeàmà Jehova aha ya bụ Boniface hụrụ otu nwoke aha ya bụ Eric, ha abụọ ebido kparịtawa ụka.
BAỊBỤL NA-AKỌ IHE OTÚ O SI MEE
Eric: Biko, anaghị m enwecha mmasị ịkpa ihe gbasara Baịbụl.
Boniface: Nsogbu adịghị. Aha m bụ Boniface. Aha nke gị kwanụ?
Boniface: Ndeewo. Olee otú i mere?
Eric: Ọ dị mma.
Boniface: Biko, ka m jụtụ gị, ị̀ na-aga chọọchị mgbe ị dị obere?
Eric: Ee. Ma, mgbe m bara mahadum, m bịara chefuo ihe gbasara chọọchị.
Boniface: Èéè? Olee ihe ị gụrụ na mahadum?
Eric: Agụrụ m gbasara ihe ndị mere n’oge ochie. Ọ na-atọ m ụtọ ịgụ akụkọ gbasara ndị mgbe ochie.
Boniface: Akụkọ na-atọkwa mụnwa ụtọ. Ị manụ na a kọrọ ọtụtụ akụkọ na Baịbụl. Baịbụl ò so n’akwụkwọ ndị ị gụrụ mgbe ahụ ị nọ mahadum?
Eric: Mba. Ama m na Baịbụl dị mma ọgụgụ, ma, amaghị m na ọtụtụ akụkọ dị n’ime ya.
Boniface: Ama m na ọ ga-amasị gị ka m gosi gị ihe ụfọdụ dị na Baịbụl. Amaghị m ma ì nwere ohere ugbu a ka m gositụ gị ihe ndị mere eme a kọrọ na Baịbụl.
Eric: Ngwanụ. Ma, enweghị m Baịbụl.
Boniface: Nsogbu adịghị. Ka m jiri nke m gosi gị ya. Ebe mbụ m chọrọ igosi gị bụ n’akwụkwọ 1 Ihe E Mere isi 29, amaokwu nke 26 na nke 27. Ọ sịrị: “Ma Devid nwa Jesi chịrị Izrel dum; ụbọchị ọ chịrị Izrel dị afọ iri anọ. Ọ chịrị afọ asaa na Hibrọn, chịakwa afọ iri atọ na atọ na Jeruselem.”
Eric: Olee ihe ị chọrọ iji ihe a ị gụrụ ugbu a kọwaa?
Boniface: E nwere ndị sị na akụkọ Eze Devid bụ akụkọ ifo.
Eric: Olee otú mmadụ ga-esi kwuo ụdị ihe ahụ?
Boniface: Otu ihe mere ha ji ekwu otú ahụ bụ na e wezụga Baịbụl, o siri ike ịhụ akwụkwọ ọzọ kọrọ gbasara Devid. Ma, n’afọ 1993, ụfọdụ ndị na-amụ banyere ihe ndị mgbe ochie gwupụtara otu nkume ndị mgbe ochie dere ihe na ya. A sụgharịa otu n’ime okwu ndị e dere na ya, ọ pụtara “Ụlọ Devid.”
Boniface: Onye ọzọ Baịbụl kọrọ gbasara ya ndị mmadụ na-ekwetaghị na ọ dịrị ndụ bụ Pọntiọs Paịlet. Ọ bụ otu n’ime ndị gọvanọ chịrị n’oge Jizọs nọ n’ụwa. E dere aha ya na Luk isi 3, amaokwu 1. E nwekwara ndị ọchịchị ndị ọzọ e dere aha ha ebe a.
Eric: Ọọ eziokwu. O nwere ebe sịrị na “mgbe Pọntiọs Paịlet bụ gọvanọ Judia, Herọd abụrụkwa onye na-achị ógbè Galili.”
Boniface: Ọọ ya. O teela ụfọdụ ndị gụrụ akwụkwọ kwuwere na akụkọ gbasara Pọntiọs Paịlet emeghị eme. Ma, ihe dị ka afọ iri ise gara aga, a chọtara otu nkume n’ala Izrel. E dekwara Pọntiọs Paịlet na ya.
Eric: Hmm. Anụtụbeghị m ihe ndị a mbụ.
Boniface: Obi dị m ụtọ na ị matala ha ugbu a.
Eric: Ịgwa gị eziokwu, ama m na Baịbụl bụ akwụkwọ e leruru anya dee. Ahụkwala m na ọ kọrọ ihe ndị mere eme, ma echeghị m na ihe dị na ya ga-abara ndị mmadụ uru n’oge anyị a.
O TEELA E DERE BAỊBỤL, MA Ọ KA BARA URU N’OGE ANYỊ A
Boniface: Ọ bụ ihe ọtụtụ ndị na-ekwu. Ma, mụnwa chere na Baịbụl ka bara uru n’oge a. Ihe mere m ji kwuo otú ahụ bụ na ihe na-akpa ụmụ mmadụ kemgbe ụwa agbanwebeghị. Dị ka ihe atụ, ihe oriri, uwe, na ụlọ na-adị ndị mmadụ mkpa kemgbe ụwa. Anyị na-achọkwa ka anyị na ndị ọzọ dịrị ná mma nakwa ka ezinụlọ anyị dịrị n’udo. Ọ́ bụghị eziokwu?
Eric: Ọọ ya.
Boniface: Baịbụl gwara anyị otú anyị ga-esi nweta ihe ndị a niile anyị chọrọ. Ọọ ya mere m ji sị na Baịbụl bara uru taa.
Eric: Kọwatụkwuoro m otú o si baa uru.
Boniface: Ihe m na-ekwu bụ na o nwere ihe ndị e dere na Baịbụl ga-abara anyị uru taa n’agbanyeghị na o teela e dere ha.
N’agbanyeghị na o teela e dere Baịbụl, ọtụtụ ihe e dere na ya na-abara anyị ezigbo uru taa otú ahụ ọ baara ndị oge ochie
Eric: Èéè? Dị ka gịnị na gịnị?
Boniface: Dị ka ihe atụ, ọ gwara anyị achụla ego ọnwụ ọnwụ, gwakwa anyị otú anyị na ndị ezinụlọ anyị na ndị ọzọ ga-esi na-adị n’udo. Baịbụl dị ka anya anyị ji ahụ ụzọ. Dị ka ihe atụ, ị manụ na ọ naghị adịcha mfe nwoke ime ka ezinụlọ ya dịrị n’udo.
Eric: Ọọ eziokwu. Ọ fọrọ obere ka ọ bụrụ otu afọ mụ na nwunye m lụrụ, ma mụ na ya ka na-enwekarị nghọtahie.
Boniface: O nwere ihe ndị Baịbụl kwuru ga-enyere unu aka. Ụfọdụ n’ime ha dị n’akwụkwọ Ndị Efesọs. Ka anyị gụọ Ndị Efesọs isi 5, amaokwu 22, 23, na nke 28. Biko, ị̀ ga-agụtụnụ ebe ahụ?
Eric: Nsogbu adịghị. Ọ sịrị: “Ka ndị bụ́ nwunye na-edo onwe ha n’okpuru ndị di ha dị ka n’okpuru Onyenwe anyị, n’ihi na di bụ isi nke nwunye ya dị ka Kraịst bụkwa isi nke ọgbakọ ahụ, ebe ọ bụ onye nzọpụta nke ahụ́ a.” Nke iri abụọ na asatọ sịrị: “N’ụzọ dị otú a, ndị bụ́ di kwesịrị ịdị na-ahụ nwunye ha n’anya dị ka ahụ́ nke ha. Onye hụrụ nwunye ya n’anya hụrụ onwe ya n’anya.”
Boniface: I meela. Ọ bụrụ na di na nwunye ana-eme ihe a e kwuru ebe a, ì chere na ha agaghị na-ebi n’udo?
Eric: Ha ga na-ebi. Ma, ọ naghịkwa adịcha mfe ime ihe a e kwuru ebe a.
Boniface: Ọ bụ eziokwu. O nweghị onye zuru okè. Ọọ ya mere amaokwu ọzọ dị n’isi nke ise ahụ ji sị ka anyị ghara ịna-eme ka ndị na-enweghị ezi uche. * O nweghị onye kwesịrị ịna-eche na di ya ma ọ bụ nwunye ya ga na-emetacha ihe niile. Mụ na nwunye m achọpụtala na Baịbụl ga-enyeliri anyị aka ịna-agbaghara ibe anyị.
Eric: Ihe a amaokwu a kwuru amaka.
Boniface: Ndịàmà Jehova nwere ebe ha na-edebe ihe n’Ịntanet. Ihe ndị ga-enyere di na nwunye aka dịkwa ebe ahụ. Ọ bụrụ na ị ka nwetụkwuru ohere, m nwere ike igosi gị ụfọdụ n’ime ha.
Eric: Nsogbu adịghị.
Boniface: Ọ dị mma. Adres ebe anyị na-edebe ihe n’Ịntanet bụ www.jw.org/ig. Ebe a bụ isimbido ya.
Eric: Hhmm. Foto ndị a amaka.
Boniface: Ha bụ foto ebe ụmụnna anyị na-ekwusa ozi ọma n’ebe dị iche iche n’ụwa. Ehee, lekwa ebe ahụ m na-agwa gị. Isiokwu ya bụ “Ihe Ga-enyere Ndị Di na Nwunye na Ndị Nne na Nna Aka.” N’ebe a, e nwere isiokwu ndị kwuru ihe dị iche iche ga-enyere di na nwunye aka. Olee nke masịrị gị?
Eric: Ọọ nke a sịrị: “Idozi Nsogbu n’Ezinụlọ Gị.” Ka m lee ma ò nwere ihe m ga-ahụ na ya ga-enyere m aka idozi nsogbu n’ezinụlọ m.
Boniface: Isiokwu a kwuru ihe anọ ga-enye aka idozi nsogbu. Legodị ihe paragraf a kwuru. Ị̀ ga-agụtụnụ ya?
Eric: Nsogbu adịghị. Ọ sịrị: “Otú ahụ nkwurịta okwu si dị mkpa n’alụmdi na nwunye, ka ịhụnanya na nsọpụrụ dịkwa mkpa.”
Boniface: I meela. O nwere amaokwu Baịbụl e dere ebe a. Ị pịa ya aka, ya emepee.
Eric: Ehee, o mepeela. Ndị Efesọs 5:33. Ọ sịrị: “Ka onye ọ bụla n’ime unu hụ nwunye ya n’anya dị ka ọ hụrụ onwe ya n’anya; n’aka nke ọzọ, onye bụ́ nwunye kwesịrị ịdị na-akwanyere di ya ùgwù nke ukwuu.”
Boniface: Ị̀ chọpụtara na ihe e kwuru ebe a mmadụ ga-eme bụ ihe di ya ma ọ bụ nwunye ya chọrọ ka o meere ya?
Eric: Aghọtachaghị m ihe ị na-ekwu.
Boniface: Ọ̀ọ na ndị di anaghị achọ ka ndị nwunye ha na-akwanyere ha ùgwù, ndị nwunye ana-achọkwa ka ndị di ha na-egosi ha na ha hụrụ ha n’anya?
Eric: Ọọ eziokwu.
Boniface: Ọ bụrụ na di ana-egosi nwunye ya na ọ hụrụ ya n’anya, í cheghị na ọ ga-adịrị nwunye ya mfe ịkwanyere ya ùgwù?
Eric: Eche m na ọ ga-adịrị ya mfe.
Boniface: O ruola ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ puku afọ abụọ e dere amaokwu Baịbụl a. Ma ọ bụrụ na di na nwunye ana-eme ihe e kwuru na ya, ọ ga-enyere ha aka ịna-ebi n’udo.
Eric: Ahụla m na Baịbụl bara uru karịa otú m chere.
Boniface: Obi dị m ụtọ maka ihe a mụ na gị kwurịtara. M ga-achọkwa ka mụ na gị hụ ụbọchị ọzọ ka ị gwa m ihe ị gụtara n’isiokwu nta sịrị, “Ihe Anọ A Ga-eme Iji Dozie Nsogbu.” Ọ dịkwa n’isiokwu a anyị kparịtara. *
Eric: Ọ dị mma. Mụ na nwunye m ga-agụ ya tupu ụbọchị ọzọ anyị ga-ahụ.
Ò nwere ihe gbara gị gharịị ị na-achọ ịma ihe Baịbụl kwuru gbasara ya? Ò nwere ihe Ndịàmà Jehova na-eme ma ọ bụ ihe ha na-akụzi ị chọrọ ịmatakwu gbasara ya? Ọ bụrụ na e nwere, biko, gwa Onyeàmà Jehova ọ bụla ị hụrụ gbasara ya. Obi ga-adị ya ụtọ ka gị na ya kwurịta ihe ahụ.
^ para. 43 Gụọ Ndị Efesọs 5:17.
^ para. 63 Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere ihe e kwuru n’isiokwu a, gụọ isi nke 14 n’akwụkwọ Gịnị n’Ezie Ka Bible Na-akụzi? Ọ bụ Ndịàmà Jehova bipụtara ya.